IDM ( Internet Download Manager ) 6.30 Build 1 Full - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Computer software Internet Download Manager PC Downloader IDM ( Internet Download Manager ) 6.30 Build 1 Full
IDM ( Internet Download Manager ) 6.30 Build 1 Full
Maung Pauk at 6:52:00 PM Computer software, Internet Download Manager, PC Downloader,
ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ ထွက်လာတဲ့ Internet Download Manager (IDM) 6.30 build 1 ဖြစ်ပါတယ်..
ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ဗားရှင်းမှာ fake serial မပေါ်တော့တဲ့အတွက် အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်..
1.Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ..
ပြီးရင် ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်ထောင့်နားက Tray ထဲမှာ IDM icon ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး exit ကိုနှိပ်ပါ..
Desktop ပေါ်က IDM Icon ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်ပါ..
(Patch တွေ ကူးထည့်စဉ်မှာ Antivirus ကိုပိတ်ထားပါ..)
2. Patch 1 ထဲက Patch 1.exe ကို ကူးထည့်ပြီး ညာကလစ်ထောက်က Run as Administrator နဲ့ run ပါ..
Crack IDM ကိုနှိပ်ပါ.. Finish ကိုနှိပ်ပြီး ပိတ်ပါ..
3. Patch2ကိုလည်း ကူးထည့်ပြီး Run as Administrator နဲ့ run ပါ.. Patch ကိုနှိပ်ပြီး နာမည်ပေးပါ..
Done ! ဆိုအဆင်ပြေပါပြီ...
လုပ်နည်းဗီဒီယိုကို အောက်မှာ ကြည့်ပါ..
ဒီဇငျဘာ ရ ရကျနေ့ ထှကျလာတဲ့ Internet Download Manager (IDM) 6.30 build 1 ဖွဈပါတယျ..
ခုတငျပေးလိုကျတဲ့ ဗားရှငျးမှာ fake serial မပျေါတော့တဲ့အတှကျ အဆငျပွကွေလိမျ့မယျထငျပါတယျ..
Setup နဲ့ Install လုပျပါ..
ပွီးရငျ ကှနျပြူတာရဲ့ ညာဘကျအောကျထောငျ့နားက Tray ထဲမှာ IDM icon ကို ညာကလဈထောကျပွီး exit ကိုနှိပျပါ..
Desktop ပျေါက IDM Icon ကိုညာကလဈထောကျပွီး Open File Location ကိုနှိပျပါ..
Patch တှေ ကူးထညျ့စဉျမှာ Antivirus ကိုပိတျထားပါ..
Patch 1 ထဲက Patch 1.exe ကို ကူးထညျ့ပွီး ညာကလဈထောကျက Run as Administrator နဲ့ run ပါ..
Crack IDM ကိုနှိပျပါ.. Finish ကိုနှိပျပွီး ပိတျပါ..
Patch2ကိုလညျး ကူးထညျ့ပွီး Run as Administrator နဲ့ run ပါ.. Patch ကိုနှိပျပွီး နာမညျပေးပါ.. Done ! ဆိုအဆငျပွပေါပွီ...
လုပျနညျးဗီဒီယိုကို အောကျမှာ ကွညျ့ပါ..
What's new in version 6.30 Build 1
(Released: Dec 07, 2017)
Home Page : http://www.internetdownloadmanager.com/
IDM Setup Download : 6.91 MB
Patch Download : 80 KB
Computer software, Internet Download Manager, PC Downloader
Computer software Internet Download Manager PC Downloader